ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်ဖွယ်ရာ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on June 11, 2012 at 9:00pm
ထေရဝါဒ ပြည်ပသာသနာ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ သတင်းလွှာ
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း (၁ဝ)ရက် တရားစခန်းပွဲ။ ။
ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်ပေမြို့သစ်မြို့နယ်၊ စန်းရှာမြို့၊ မဟာထေရကဿပရိပ်သာ တရုတ်မြန်မာကျောင်းတွင် ရန်ကုန် မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာကြီး၏ သြဝါဒါစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနစရိယ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇဋိလက (၁၃.၆.၂ဝ၁၂ မှ ၂၃.၆.၂ဝ၁၂ အထိ) (၁ဝ)ရက်တိုင်တိုင် ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း (၁ဝ)ရက် တရားစခန်းပွဲကို တရုတ်မြန်မာ ယောဂီ (၃ဝ)ဦးဖြင့် စတင်ကာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ်လတိုင်း၏ နောက်ဆုံး(၁ဝ)ရက်ကို တရားစခန်းရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ တရားစခန်းကို ဆက်လက်ကာ ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ယောဂီရော မြန်မာယောဂီများမပါ (မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို) စိတ်ပါ ဝင်စားသူတိုင်း မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော ဝိပဿနာ တရားတော်ကို လာရောက်ကာ လေ့လာရှုပွါးနိုင်ပါကြောင်း နှိုးဆော်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မဟာထေရကဿပ ရိပ်သာ၏ သမိုင်းအစ။ ။
ဤရိပ်သာကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းကို သိချင်လျှင် ထိုင်ဝမ်ဆရာတော်၏ မင်္ဂလာစာစောင်ပါ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလွှာကို လေ့လာကြည့်ပါဦး။
ထိုင်ဝမ်ပြည်ပသာသနာပြုကျောင်းကိုတရုတ်မြန်မာဒကာဒကာမများဖြင့်1986ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်၊၂၅နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီယခုအခါပြည်ပထွက်သူမြန်မာများအပြီးပြန်လာသူများအလွန်များပြားလာသည့်အတွက် 2006ခုနှစ်မှစပြီးကျောင်းသစ်ဖြစ်မြောက်ရေး မြေရှာ၍ ကျောင်း ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ရာ မြေဈေးအိမ်ဈေးများအဆမတန်ကြီးမြင့်နေသဖြင့်အချိန်ဆိုင်း၍့နေခဲရ ပါသည်။ ယခုအခါထိုင်ဝမ်တရုတ်မြန်မာဘုရားကျောင်းသစ်ကိုရှင်းထိုင်ပေ စန်းရှာမြို့ စန်းရှာတောင် ပေါ်တွင် တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးပိုင်ဆောက်လုပ်ပြီးပုံစံပါကျောင်းးဆောင်များအပါအဝင်မြေ (3137.8) ရှိသော ကျောင်းမြေကို ထိုင်ဝမ်တရုတ်မြန်မာဘုရားကျောင်းဆရာတော်များနှင့်တရုတ်မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အသင်းသူအသင်းသား ဒကာဒကာမများက ဗုဒ္ဓသာသနာတော် အရှည်တည်တံ့ပြန့် ပွား တိုးတက်ဆောင်ရွက်နှိုင်စေရန်
ကျေးဇူရှင် သာသနာ့ မိခင်ကြီး ဒေါ်စန်းရီ နှင့် ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ခင်ရီ မိသားစု (ရှိုင်းဟုတ်ကုမ္ပဏီ)မှ (ထိုင်ဝမ် NT $ (485) သိန်း၊ US$ (16.2)သိန်းဖြင့် (2011) ခု အောက်တိုဘာလ (13) ရက်နေ့ တွင် ဝယ်ယူလှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းတော်ကြီးအမည်မှာ 迦葉襌寺 မဟာထေရ ကဿပ ရိပ်သာ
ဖြစ်ပြီး ထိုင်ပေ စန်းရှာ တောင်ပေါ်တွင် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ရှေးဟောင်း အနုပညာတို့ဖြင့် ချယ်သ၍ တည်ဆောက်ထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်၊
ထိုကျောင်တော်ကြီးကို အစဉ်မပျက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောာင့်ရှောက်ရန် မြန်မာပုံစံ အတုလ ကမ္ဘာအေး စေတီတော် တည်ဆောက်ရန်နှင့်၊ အသစ် တဖန် ပြန်လည်ပြုပြင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်၍
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးမှ "စုပေါင်းခြင်းသည်အင်အား ညီညွတ်ခြင်းသည်အလုပ်ဖြစ်၏ "ဆိုသည့်အတိုင်း
ကမ္ဘာ နှင်ြ့မန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးက လုပ်အား အချိန်-ပစ္စည်းနှင့် အလှူငွေများ ကူညီပံ့ပိုး လှူဒါန်းပေးကြပါရန် ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ထေရဝါဒသာသနာ ကမ္ဘာမှာ တည်တန့်ပြန့် ပွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အကျိုးမျှော်၍ လေးလေးစားစား ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ထိုင်ဝမ်သာသနာ သတင်းလွှာကို ပေးပို့နှိူးဆော် လိုက်ရပါသည်။ ကူညီပံ့ပိုးလှူဖွယ်ရာ အမျိုမျိုးအတွက်ဤစာဆောင် စာမျက်နှာ( )တွင်ဖေါ်ပြထားပါ သည်။ မိမိတို့ဆန္ဒအတိုင်း ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည် ။
လုံးစုံများစွာ ဝေနေယာ ချမ်းသားကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
ဘဒ္ဒန္တ နန္ဒဝံသ(ထိုင်ဝမ်ဆရာတော် )
2011 နိုဝင်ဘာ 23
With many ancient Buddhist Arts decorated MAHAKASSAPA BUDDHIST TEMPLE is located at San Xia Mountain Area in New Taipei City, Taiwan for about twenty years and now it has been taken over by the CHINESE MYANMAR BUDDHIST ASSOCIATION (C.M.B.A,) on October 13, 2011.
We are enthusiastic aspiration on Renovation, Maintaining and Expanding of this Temple forever and cordially invite with highly appreciated your generously participate in Finance & Material Supports and Volunteer Activity.
於 2011年10月 13日開始由中緬南傳佛教協會(C.M.B.A.)收購接管一座二十年歷久之古代佛教藝術裝飾的摩詞迦葉禪寺 (MAHAKASSAPA) 位於在台灣新北市三峽山區.
不謹保存和保護這座記念碑是我們的高度優先事宜而且也有雄心勃勃的計劃要改造與滱擴建目標. 為了成功地達到此願望, 我們謹以誠摯的邀請大家來踴躍參加樂意讚助資金, 物資, 志工等之活動.
၂၀၀၆ခု မေလ-၇-ရက်နေ့ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ပွဲတော်တွင် ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကိုယ်တော်တိုင်သက်တော် ၈၀ အရွယ်တွင်ထိုင်ဝမ်ကျောင်း၏ ၅-ထပ် ၆-ထပ်ပေါ်တက်ရသည့် ဒုက္ခ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို စာနာ သနား ကရုဏာ များဖြင့်၊ဆရာတော်ဦးဆောင်ဝယ်၍မြေပြင်မှာဘုရားစေတီဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ရန်တိုက်တွန်းကာသြဝါဒတရားမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ထိုအချိန်မှစပြီးအောက်ပါနာယကများဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာယခုကျောင်းမြေဝယ်ယူသည့်နေ့အထိ ၆-နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါသည်။
ထိုင်ဝမ်အတုလကမ္ဘာအေးစေတီတော် တည်ဆောက်ရာတွင်တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ကြမည့် ဦိးဆောင်နာယကများ ။
၁။ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု ပီနန်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာဝံသ (အမေရိက စင်ကာပူ မလေးရှား )
၂။ ဘဒ္ဒန္တဒေါက်တာဇာဂရ ( သြစတေးလျား ဆစ်ဒနီ )
၃။ဘဒ္ဒန္တသုန္ဒရ ( အမေရိက L.A )
၄။ဘဒ္ဒန္တတိလောက ( စင်္ကာပူ )
၅။ဘဒ္ဒန္တဆေကိန္ဒ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက် ( မှော်ဘီ ရန်ကုန်)
၆။ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒိယျ ( သြစတေးလျား ဆစ်ဒနီ )
၇။ ဘဒ္ဒန္တသုမန (နယူးဇီလန် ၊ အောက်ကလန်း)
၈။ ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ ( ကနေဒါ တိုရန်တို )
၉။ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒဝံသ ( ထိုင်ဝမ်၊ ကနေဒါ )
၁၀။ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒသိရီ (ထိုင်ဝမ်က၊ကနေဒါ )
၁၁။ ဘဒ္ဒန္တပညာဇောတ (ထိုင်ဝမ် )
၁၂။ ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဒိယ ( ရွှေသုဝဏ်ဆရာတော် ရန်ကုန်)
၁၃။ ဘဒ္ဒန္တသြဘာသ (တိုကျို-ဂျပန်)
၁၅။ ဥိးတိတ်လှိုင် (ထိုင်ဝမ်)
၁၆။ ဦးစိန်ဝင်း (ထိုင်ဝမ်)
၁၇။ ဒေါ်စန်းရီ (ထိုင်ဝမ်)
၁၈။ ဒေါ်မြတ်မြတ်မွန် (ထိုင်ဝမ်) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျောင်တည်နေရာ လိပ်စာ။ ။
No.329-1, Tianfu Rd, Sanxia Dist., New Taipei City 237, Taiwan (R.O.C.)
၁။ဦးပညာဇောတ ၂။ဦးသောဘိတ ၃။ဦးပညာဒီပ
Chinese Myanmar Buddhist Association,No.122,5F Chung Hsiao St.
Chung He, New Taipei City. Taiwan. Tel:(02) 2940-2646
၁။ ဆရာတော်ဦးတိလောက(စင်္ကာပူ) (65) 6251-1717
၂။ ဦးပဏ္ဍဝါစာရ (စင်္ကာပူ-ဓမ္မဥယျာဉ် စင်္ကာပူ ) (65) 9734-1415
၃။ ဆရာတော်ဦးကောဝိဒ၊ တိုရန်တိုကျောင်း ၊ကနေဒါ (416) 747 7879
၄။ ဒေါ်ဟယ်လင် - ကနေဒါ (BBAO) (905) 270 6028
၅။ အရှင်ဃောသက ဗုဒ္ဓရံသီကျောင်း ဗန်ကူးဗား ကနေဒါ (604) 207 0068
၆။ ဦးသြသဓ မေတ္တာဝိဟာရီကျောင်း Saskatoon ကနေဒါ (306) 382 0461
၇။ ဦးဥက္ကံသ (ရတနာဝါသကျောင်း ကျုံးလီ ထိုင်ဝမ် )(03) 4162397
၈။ ဦးသြဘာသ တိုကျို ဂျပန် (81-3-09733348)
၉။ ဦးဝိလာသ-မဟာအောင်မြေ(နယူးယောက် U.S.A)7188031585
၁၀။ဦးပါမောက္ခ ဝိသုဒ္ဓါရုံဓမ္မရံသီကျောင်း(နယူးယောက် U.S.A)7186393834
၁၁။ ဦး န္ဒက အောင်ရတနာကျောင်းမေရီလင်းဝါရှင်တန် 3015400565
ဒါနံ သဗ္ဗတ္ထ သာဓကံ
ရန်သူကင်းဝေး စိတ်အေးကြည်ဖြူ ၊